Moto X4, fahatsapana voalohany | Androidsis
Motorola sy Lenovo dia namoaka ny Moto X4 amin'ny fanontana farany an'ny IFA any Berlin. Fitaovana tsy ampoizina amin'ny kalitaon'ny famaranana ankoatry ny fananana rafitra fakantsary roa izay manome ny fahafaha-maka sary amin'ny bokeh na tsy mifantoka.
Ankehitriny dia nanakaiky ny toeran'ny mpanamboatra izahay tao anatin'ny IFA any Berlin mba hitsapana ny telefaona fianakaviana X vaovao. Fihetseham-po voalohany taorian'ny fitsapana ny Moto X4 ao amin'ny IFA 2017.
2 Toetra mampiavaka ny Moto X4
Mikasika ny famolavolana Moto X4, lazao fa nahavita asa lehibe ny mpanamboatra. Ny telefaona dia misy vatana vita amin'ny vera antitra manome ny terminal a tena fijery premium sy fahatsapana. Izy io koa dia manana fehezana aliminioma izay manodidina ny terminal manome ampiana fanampiny ho an'ireo famaranana efa mahavariana.
Tsy dia mavesatra loatra ny telefaona ary mahatsapa tena tsara eo an-tanana, maha fitaovana voalanjalanja tsara. Tiako io fahasarotana mampiavaka ny bokotra Moto X4 io sy ny heriny izay manamora ny manavaka azy amin'ny lakilen'ny fanaraha-maso.
Amin'ny ankapobeny, ny telefaona dia miorina tsara ary na eo aza ny elanelam-potoana avo lenta ny marina dia ny asa amin'ity lafiny ity fa tsy marina.
Toetra mampiavaka ny Moto X4
modely Moto X4
efijery 5.2 mirefy LTPS IPS Full HD + Corning Gorilla Glass
vahaolana 1080 X 1920
processeur Qualcomm Snapdragon 630 misy atiny valo 2.2 GHz
GPU Adreno 508 hatramin'ny 650 MHz
Tahiry anatiny 32 GB na 64 GB azo esorina amin'ny alàlan'ny slot karatra fahatsiarovana microSD hatramin'ny TERAS 2 fanampiny
Efitra lehibe Dual - 12 MPX miaraka amina fizarana autofocus (PDAF) aperture f / 2.0 + 8 MPX Wide Angle miaraka amin'ny fijery 120º sy aperture f / 2.2 + Dual LED flash miaraka amin'ny maripana miloko
Fakan-tsary mialoha 16 MPX zoro malalaka amin'ny zoro f / 2.0 + Jiro Flash / selfie
Conectividad Bluetooth 5.0 BLE - Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4GHz + 5GH - 4G LTE + 3.5 mm mpampifandray jack + Nano SIM + Dual SIM
Sela Mpandray Hafanana Mpamaky ny dian-tànana + Gravity + Proximity + Accelerometer + Jiro manodidina + Magnetometer + Gyroscope + Sensor hub
Fanoherana ny vovoka sy rano IP68
bateria 3.000 mAh tsy azo esorina + TurboPower 15 W mandritra ny herinaratra 6 ora ao anatin'ny 15 minitra fotsiny
toerana GPS + GLONASS + Galileo
lafiny X X 148.35 73.4 7.99 MG
loko Super Black + Blue Sterling
Ara-teknika ny Moto X4 dia telefaona tsara ahafahanao mankafy lalao na rindranasa tsy misy olana, na ohatrinona na dia enta-mavesatra ilain'izy ireo aza. Ny fitsapana izay azoko natao tamin'ny efijery dia manamafy ny kalitaon'ny takelaka Super AMOLED, miaraka amin'ny loko mazava sy maranitra toy izany.
Ny fakantsary Moto X4 dia iray amin'ny tanjaky ny telefaona ary, ny fisian'ny fananana miaraka amin'ny rafitry ny solomaso roa izay ahafahanao maka sary miaraka amin'ny bokeh na effets tsy misy ifantohana manome bonus fanampiny ho an'ny finday Motorola vaovao.
Ny antsipiriany hafa izay nahagaga ahy ahy, ho an'en, ny zava-misy fa ny Moto X4 dia mahatohitra ny vovoka sy ny rano, toetra tokony hananan'ny terminal any afovoany ambonimbony rehetra, koa amin'io lafiny io dia tsy maintsy arahabaiko ny ekipa Motorola.
Fitaovana iray tena feno mitazona ny tsipika asehon'ny Motorola hatreto: terminal tsara amin'ny vidiny mirary; Ny Moto X4 dia vidiny 399 euro fotsiny rehefa tonga eo amin'ny tsena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Motorola » Moto X4, fahatsapana voalohany
Tsara ny misaotra, misaotra
Sony Xperia XZ Premium, fahatsapana voalohany